“Andisacingi Ngokutshintsha Ihlabathi” | IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikongo IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuo IsiMalagasy IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
“Andisacingi Ngokutshintsha Ihlabathi”
KUBALISA UJUKKA SYLGREN
UNYAKA WOKUZALWA: 1966
UBOMI BANGAPHAMBILI: IQHAWE LOMZABALAZO
Ndaqala ndisemncinci ukuthanda indalo. Intsapho yasekhaya yayidla ngokuphuma iye kubuka amahlathi amahle kunye namachibi angqonge idolophu yaseJyväskylä, ekuMbindi weFinland. Ndikwanguye nomthandi wezilwanyana, ebutsheni bam ndandifuna ukwanga zonke iikati nezinja endidibana nazo! Ndakhula ndingayithandi indlela abantu abaziphatha kakubi ngayo izilwanyana. Ekuhambeni kwexesha, ndangenela umbutho ojongene namalungelo ezilwanyana, apho ndadibana nabantu abafana nam.
Sasizabalaza sisilwela amalungelo ezilwanyana. Sasisasaza inkcazelo ngeematshi esasiba nazo nxamnye neevenkile ezazithengisa uboya bezilwanyana kunye nezenzululwazi ezenza uvavanyo kwizilwanyana. Sada saqalisa nombutho omtsha wokukhusela izilwanyana. Ekubeni maxa wambi sasisenza izinto ngendlela ebaxiweyo, saside singene ezingxakini ezinkulu. Maninzi amathuba endiye ndabanjwa ngawo, ndaza ndasiwa enkundleni.
Ngaphandle kokukhathazwa yindlela eziphethwe kakubi ngayo izilwanyana, kwakukho nezinye iingxaki ezingaginyisi-mathe. Ekuhambeni kwexesha ndaba lilungu lemibutho eliqela, njengeAmnesty International kunye neGreen­peace. Ndazijula nejacu kule mibutho. Ndandithethelela amahlwempu, nabantu abangajongelwanga ntweni ngabanye.
Kodwa ndaqonda ukuba andinakuze ndilitshintshe eli hlabathi. Nangona le mibutho yayisenokuzicombulula iingxaki ezincinane, kwakukho iingxaki ezingangeentaba ezaziqhubeka zisanda. Kwakungathi ubungendawo bugqugqise emhlabeni wonke kwaye akukho mntu unexesha laloo nto.
Ndandidane kakhulu ngenxa yokungabi namandla okutshintsha izinto, ngoko ndaqalisa ukucinga ngoThixo nangeBhayibhile. Ndandikhe ndayifunda iBhayibhile namaNgqina kaYehova. Ndandiyixabisa into yokuba amaNgqina enobubele kunye nomdla kum, nto nje ndandingekakulungeli ukutshintsha indlela endiphila ngayo. Kodwa ngoku izinto zazitshintshile.
Ndakhupha iBhayibhile ndaza ndaqalisa ukuyifunda. Yayiwapholisa onke amanxeba am. Ndabona iivesi zeBhayibhile ezithetha ngokuziphatha kakuhle izilwanyana. Ngokomzekelo iMizekeliso 12:10 ithi, “amalungisa azikhathalele izilwanyana.” (IGood News Translation) Ndazibonela nokuba iingxaki zehlabathi azibangelwa nguThixo. Kodwa iingxaki zethu zanda ngenxa yokuba singamthobeli uThixo. Ndavuya kakhulu ndakufunda ngothando nokusinyamezela kukaYehova.—INdumiso 103:8-14.
Malunga nelo xesha ndafumana iphecana elithetha ngencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? ndabhala kulo iadresi yam ndaza ndayithumela. Kungekudala emva koko kwafika isibini esingamaNgqina saza sacela ukundifundisa iBhayibhile. Ndaqalisa ukuya kwiHolo yamaNgqina. Ndandizithanda kakhulu izinto endandizifunda.
Ngoncedo lweBhayibhile ndakwazi ukwenza utshintsho oluninzi ebomini bam. Ndayeka ukutshaya kunye nokunxila. Ndalungisa indlela endinxiba ngayo ndaza ndaphucula nendlela endithetha ngayo nabanye. Indlela endiwajonga ngayo amagunya nayo yatshintsha. (Roma 13:1) Ubomi bam bangaphambili ndabushiya.
Eyona nto kwakunzima ukuyenza yayikukuyijonga kakuhle imibutho yabantu ejongene namalungelo ezilwanyana. Kwakungelulanga, ekuqaleni ndandicinga ukuba ndiyishiya ngelibi le mibutho xa ndisuka nje ndiyeke. Kodwa ke yacaca kum into yokuba, esona sicombululo sazo zonke iingxaki esijongene nazo buBukumkani bukaThixo. Ndagqiba kwelokuba ndibuxhase obu Bukumkani ndize ndincede nabanye ukuba bafunde ngabo.—Mateyu 6:33.
Ndandiphambili kumzabalazo kwaye abantu ndibajonga ngeendlela ezahlukeneyo—ababi nabalungileyo—ze abo babi ndibabonel’ icebo. Kodwa iBhayibhile yandinceda, kuba ngoku andisenanzondo. Kunoko, ndizama ukubathanda bonke abantu. (Mateyu 5:44) Enye indlela endilubonisa ngayo uthando, kukuxelela abanye ngoBukumkani bukaThixo. Kuyandivuyisa ukubona indlela lo msebenzi mhle, usenza sibe noxolo nolonwabo kwaye ubangela ithemba.
Ndinoxolo ngoku kuba zonke izinto ndiziyekele kuYehova. Ndiqinisekile ukuba, uMdali wethu akasoze ayekele abantu nezilwanyana ziphathwe kakubi okanye avumele umhlaba wonakaliswe ngonaphakade. Kunoko uBukumkani bakhe, kungekudala buza kulungisa wonke umonakalo. (Isaya 11:1-9) Kuyandivuyisa ukwazi ezi nyaniso ndize ndincede nabanye ukuba bazazi. Ngoku andisacingi ngokutshintsha ihlabathi.